MAHAJANGA : Tsy misy mampilaza amin’ny fokontany ireo mpivahiny tonga miala sasatra
Amin’izao fotoanan’ny fialan-tsasatra izao dia maro ny olona miala ny toerana misy azy ka mandeha any amin’ny toeran-kafa. 29 août 2017
Raha ao Mahajanga dia betsaka ny mpivahiny tonga miala sasatra avy amin’ny faritra hafa. Raha ny voarakitra ny lalàna dia tokony manao fanamarinam-ponenana amin’ny fokontany izay ipetrahany ireo mpitsidika izay vao afaka mipetraka amin’ny fokontany iray.
Tsy izany anefa no zava-misy fa zara raha mampilaza eny anivon’ny fokontany ireo vahiny ireo. Ilaina ny fandehanana eny amin’ny biraon’ny fokontany milaza fa mivahiny sy monina amin’ny toerana iray.
Tsy sarotra akory ny manao izany ary tsy ilàna taratasy maro ihany koa raha ny tatitra avy amin’ny lehiben’ny fokontany Tsaramandroso Ambony izay nanaovana ny fanadihadiana. Dika mitovy amin’ny kara-panondro na pasipaoro no hamantarana ny olona monina ao amin’ny fokontany izay misy azy. Miverina any amin’ny biraon’ny fokontany indray rehefa hody any amin’ny tany niaviany.
Ireo no dingana tokony harahina raha toa ka mivahiny amin’ny toerana iray mba hialana amin’ny mety ho fisian’ny mpanao ratsy tonga amin’ny fokontany iray sy ny loza mety hitranga.